galmudugnews.com » Topnews:- Kaah Express oo loo aqoonsaday Xawaalad Soomaaliyeed- Awdal iyo Khaatuma.
Home » WARARKA » Topnews:- Kaah Express oo loo aqoonsaday Xawaalad Soomaaliyeed- Awdal iyo Khaatuma. Topnews:- Kaah Express oo loo aqoonsaday Xawaalad Soomaaliyeed- Awdal iyo Khaatuma. admin on
Nov 21st, 2012 //
No Comment Views 163103Galmudugnews.com— Kaah Express ayaa loo aqoonsaday Xawaalad Soomaaliyeed oo ka madaxbanaan siyaasad iyo qabyaalad .
Macaamiisha Shirkadda Kaah Express ayaa %40 kor u kacday sanadkaan markii Maamulka Shirkadda uu la wareegay Hassan Abdi Cawad oo ka mida Xeeldheerayaasha Ganacsiga iyo Maamulka ee Geeska Afrika ,shaqsiyaadka ugu caansan.
Hassan Cawad oo balaariyay Xawaalada Kaah wuxuu ka hoowlgeliyay dad iskugu jira dhamaan qabiilada Somalida
Maamulaha Kaah Express Wakiiladda uu ka sameeyay Xarumaha Caalamka oo lagu yaqaan aqoon iyo shaqo wanaag ayaa sawir qurux badan ka bixiyay muuqaalka Shirkadda .
Bulshada u dhalatay Khaatuma State iyo Awdal State ayaa amaanay Xawaalada Kaah waxayna sheegeen inay tahay Shirkad madaxbanaan oo degaanadooda ka fulisay adeegyo dhaxalgala.
Bulshada u dhalatay Khaatuma State iyo Awdal State waxay hore qaxeen Xawaaladihii ay macaamisha la lahaayeen oo siyaasada ku milmay.
Kaah Express oo la rumeeysan yahay inay hada ku jirto kaalinta labaad ee Horyaalnimada Xawaaladaha Somalia waxaa hubaala inay sanadka cusub geli doonto kaalinta 1-aad hadii ay laba laabto tartankeeda ganacsi .
Somalidu waxay u baahan yihiin ganacsi xora oo xalaala balse uma baahna in faa’iidada laga helo adeegooda lagu huriyo colaad ama dadka Soomaaliyeed lagu laayo.
Siyaasadda iyo Ganacsiga waa laba kala fog oo aan is qaban karin.
Shirkadii siyaasad ku lug yeelato waxaa ku qoran taariikhda inay burbur ku dambeyso maxaa yeelay Siyaasadu waxay kala dishaa ama isku naca Wiil iyo Aabahiis.
Dadka qiimeeyo ganacsiga Somalida waxay Kaah Express ku sifeeyeen inay tahay Xawaalad Soomaaliyeed.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139369 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31877 hitsContact US - 30554 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26133 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25630 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25251 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23896 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23025 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22360 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22312 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21429 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21106 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21097 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20794 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19868 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19847 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19231 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18484 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17790 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17703 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17670 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16900 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16810 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15533 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15457 hits Home Contact US